ANDREFAN’NY TSENAN’ ANOSIBE : Olona miisa 4 levon’ny afo, aminan- tapitrisany ny fahapotehana
Ankoatra ny fisehoan’ny lozam-pifamoivoizana tato ho ato dia manao ranolava ihany koa ny trangana hain-trano amin’izao fotoana izao eto an-drenivohitra. 9 novembre 2018
Trano manodidina andrefan’ny Tsenan’Anosibe no may kila forehitra ny 7 novambra lasa teo, tokony ho tamin’ ny folo ora alina tany ho any. Nahazo hery ny afo ary niitatra tamin’ ireo tsena sasantsasany izany, raha ny loharanom-baovao vorainay teny an-toerana omaly. Vokany, olona miisa efatra be izao no fantatra tamin’ny ora nanoratanay fa namoy ny ainy, levon’ny afo nandritra ny fahamaizana.
Trano manodidina ny 300 tafo any ho any koa no kila forehitra, ka entana marobe tombanana an-tapitrisany no levona sy nanjavona tao anatin’ny fotoana fohy. Anisany tena nampirongatra ny firehetana ireo trano hazo teo amin’ny manodidina ka misy tamin’ireo mponina no nilaza fa vokatry ny fampiasana labozia no nahatonga ny voina. Hatramin’ny omaly nanoratanay hatrany anefa dia mbola tsy voafaritra mazava ny zava-nisy.
Tsikaritra tamin’ny zavatra hita ifotony àry fa mbola mikaroka izay sisa tavela tao anaty lavenona ireo fokonolona. Niezaka nifarimbona ny teo amin’ny manodidina tamin’ny famonoana ny afo saingy tsy nahitam-bokany intsony. Nampimeno-menona ny mponina ny fiandrasana ela ireo mpamonjy voina. Miantsoroka ny famotorana ity tranga ity moa ny eo anivon’ny mpitandro filaminana eny an-toerana ankehitriny.